काठमाडौंको वायु प्रदूषणले फोक्सोमा गम्भीर असर गर्नसक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा केही दिनदेखि बढेको वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन् । काठमाडौंको आकाशलाई ढाकेको तुवालो सोमबार झन बढेपछि मानिसहरूमा चिन्ता बढेर ग…
चीनले नेपाललाई दिएको आठ लाख मात्रा कोरोना बिरुद्धको खोप आइपुग्यो
काठमाडौँ । चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आज आइपुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी–३३० जहाजबाट कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ बिहान ९.१…
अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँः स्वास्थ्य मन्त्रालय, ‘वायु प्रदूषण केही समयसम्म रहन सक्छ’
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा शुक्रबारदेखि अचानक देखिएको तुवाँलो र बढेको वायु प्रदूषणको स्तर केही समयसम्म रहन सक्ने देखिएको छ । वायु प्रदूषण मौसममा पनि भरपर्छ । मौसम यस्तै भइरहे केही समयस…
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयले मौसममा आएको परिवर्तनसँग काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको वायु प्रदूषण बढेकोले अत्यावश्यक काम वाहेक घर बाहिर ननिस्कन सबैलाई अपिल गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरक…
प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोनाः कतारमा पाँच बढी भेला हुन नपाइने
काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कोरोना भाइरसको लहर बढ्न थालेको छ । पछिल्ला केही समययता मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, बहराइन र दक्षिण कोरियामा फेर…
एशियन लाइफले हस्तान्तरण गर्यो मृत्यु दाबी बापतको रु. ५९ लाख
काठमाण्डौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट बनेपा शाखाले स्व. राजुकुमार अधिकारीको परिवारलाई मृत्यु दाबी वापत आज रु. ५९ लाख २० हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धक लोकराज …
काठमाडौँ । ज्यास्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्सद्वारा उत्पादित र नेपालमा बनेको पहिलो स्यानिटरी प्याड ब्राण्ड सेफ्टीले आफ्नो शृँखलामा महिनावारी कप र ट्याम्पन्सलाई हालै प्रस्तुत गरेको छ । सेफ्टी स्यानिटरी प्याड्स सुलभ मुल्यमा विश्वस्तर…
कोरोनाको असर भयावह हुन नदिन सरकार चिन्तित, ‘मानिस सोत्तर भए भने अर्थतन्त्र के काम’: प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको असर भयावह हुन नदिन सरकार सतर्क रहेको बताएका छन् । कोरोना महामारीको पनि महामारी भएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । यो फर्फी फर्की आउने महामारी हो । जेसुकै भ…